Noyo ESL, အင်္ဂလိပ်စာကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာသင်ယူရန် ငါက Mac ကပါ
Noyo ESL, အင်္ဂလိပ်စာကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်အခမဲ့လေ့လာရန် app
ယရှေု Arjona Montalvo | | Mac က App Store ကို, Mac OS X ကို, အတော်ကြာ
စပိန်စကားပြောသူများအတွက် Noyo ESL တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် app အထူးစပိန် - စပီကာများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ပုံမှန်ဈေးနှုန်းပါ 3,99 €နှင့်ကန့်သတ်အချိန်အဘို့ဖြစ်၏ လုံးဝအခမဲ့.
စပိန်စကားပြောသူများအတွက် Noyo ESL ဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရကိုလေ့လာပါ။ Noyo ESL သည်သင်နှင့်အင်္ဂလိပ်လိုလေ့ကျင့်ရန်ကူညီသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည် ရယ်စရာသရုပ်ဖော်ပုံများ y အရည်အသွေးမြင့်သောအသံ။ ကျောင်း၊ အစားအစာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အိမ်၊ စီးတီး၊ အားကစားနှင့်အခြားအရာများအကြောင်းပြောဆိုရန်စကားလုံးများနှင့်စကားစုများကိုသင်သင်ယူနိုင်သည်။
2 Noyo အသုံးပြုနည်း
3 ပညာရှင်များအတွက် Noyo ESL:
4 ဗားရှင်း ၃.၂.၇ ထဲတွင်ဘာအသစ်များ
ပေါင်းစည်းထားသောဒေတာစုဆောင်းမှု! သင်ယူရရှိသောစကားလုံးအရေအတွက်၊ လျှောက်လွှာတွင်သုံးရသောအချိန်၊ တစ် ဦး ချင်းရမှတ်များနှင့်ပျမ်းမျှရမှတ်များကိုစစ်ဆေးပါ။
Noyo ဖြင့်ဝေါဟာရအသစ်သင်ယူရန်လွယ်ကူသည်။။ ငါတို့ပျော်စရာတစ်ခု၊ အထူးသဖြင့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည် ပုံမြင်ကွင်းများ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးသို့မဟုတ်စကားစုနှင့် ၄ င်း၏စပိန်ဘာသာပြန်ခြင်းကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ဇာတိအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူပြောသောစကားကိုကြားရန်။ ပိုရှည်သောဝါကျကိုကြားနိုင်ရန်မြင်ကွင်းတစ်ခုစီ၏ခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်ပါ။
ပညာရှင်များအတွက် Noyo ESL:
စပိန်စကားပြောသူများအတွက် Noyo ESL သည်အနီးကပ်အလုပ်လုပ်သည် ပညာပေး ဝေါဟာရသင်ယူခြင်းကိုက။ က ပျော်စရာအများကြီး chore။ Noyo ESL ဆက်စပ်သင်ယူမှုမှတဆင့်ဝေါဟာရသင်ပေးတယ်။ ဝေါဟာရတစ်ခုချင်းစီကိုရောင်စုံအပြန်အလှန်မြင်ကွင်းတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစည်းပြီးလိုက်ပါသွားသည် ဇာတိစပီကာများကမှတ်တမ်းတင်အသံနှင့်တစ်ခုချင်းစီကိုယူနစ်၏တ ဦး တည်းအပိုင်းအစပါရှိသည် ဘက်ပေါင်းစုံအကဲဖြတ်.
လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုပြီးကျောင်းသားဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးစွဲသည်၊ ကျောင်းသားနှင့်စကားပြောဆိုသောစကားလုံးအရေအတွက်၊ ယူနစ်တစ်ခုစီအတွက်ရမှတ်များနှင့်စုစုပေါင်းပျမ်းမျှရမှတ်သည်လျှောက်လွှာသည်အလိုအလျောက်ခြေရာခံသည်။ အဆိုပါဘက်ပေါင်းစုံအီးမေးလ် function ကို ကျောင်းသားအားအိမ်၌ဖြစ်စေ၊ စာသင်ခန်းဖြစ်စေခွင့်ပြုသည် နှင့် ထို့နောက်သင်၏ရလဒ်များကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ပါ.
အရွယ်: 143 ကို MB
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: Sankaty သင်ယူ Ventures LLC
compatibility: OS X 10.6 နှင့်အထက် 64-bit processor
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac က App Store ကို » Noyo ESL, အင်္ဂလိပ်စာကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်အခမဲ့လေ့လာရန် app
OS X El Capitan ရှိ Split View ပြproblemsနာများကိုဤရိုးရှင်းသောရွေးချယ်မှုဖြင့်ဖြေရှင်းပါ
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Mac ကိုယခုဝယ်ပါသလားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ကိုစောင့်နေသလား။